Yuusuf Dabageed oo beeniyay eedo xooggan oo loo jeediyay | KEYDMEDIA ENGLISH
Yuusuf Dabageed oo beeniyay eedo xooggan oo loo jeediyay
Yusuf Ahmed Hagar (Dabageed), ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay, warar sheegaya inuu qorsheynayo la xiro inta badan kuraasta beeshiisa Xawaadle, si ay ugu soo baxaan shaqsiyaad Farmaajo iyo Fahad Yaasiin doonayaan.
BALADWEYE, Soomaaliya – Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Yusuf Ahmed Hagar (Dabageed) ayaa markii ugu horreysay ka hadlay, warar xooggan oo maalmihii la soo dhaafay sheegayay in khilaaf adag kala dhaxeeyo Madaxweynaha maamulka Cali Cabdullaahi Xuseen (Guudlaawe).
Yuusuf Dabageed, oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA, ayaa beeniyay, guud ahaan wararkaas, wuxuuna wax kama jiraan ku tilmaamay, inuu u bira-tumayo boobka, kuraasta iyo inuu madaxtooyada Soomaaliya kala shaqeynaayo sidii dad gaar ah loogu xiri lahaa qaar ka mid ah kuraasta Hiiraan.
Qaar ka mid ah musharixiinta kuraas doonka ah, ayuu ku eedeeyay in ay abuureen, wararka la xariira in kuraas la xirayo, isla-markaana uu isagu u adeegayo Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, xilli ay xusid mudan tahay in Cali Guudlaawe uu muujiyey niyad wanaag iyo in doorashada si furan loogu tartamo.
Aniga iyo Madaxweyne Guudlaawe, hal maalin isma khilaafin, isaga ayaa go’aanka ugu danbeeya leh, go’aanka aan u soo jeediyana wuu qaataa, hal sano iyo bar ayaan isla shaqeyneynaa, hal marna isma aanan khilaafin, ayuu yiri, Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle.
Yusuf Ahmed Hagar, wuxuu caddeeyay in uusan jirin kursi uu Madaxweynuhu furay oo uu isagu xirayo, haka uu xusay in isaga iyo Guudlaawe, isku aragti ka yihiin, hannaanka loo marayo qabashada doorashada kuraasta taalla Baladweyne, hayeeshee, doorashada saddex kursi oo maanta dhaceysa ayaa loo xiray shaqsiyaad gaar ah.
Yuusuf Dabageed, wuxuu hore u sheegay in kuraasta taalla Baladweyne, ay kaliya ku soo bixi doonaan, shaqsiyaad uu isago oggol yahay, taasoo loo fasirtay, inuu hor istaagi doono xubnaha mucaaradka ku ahaa Farmaajo, oo ay ugu horreeyaan, Jindi oo hadda tartanka ka haray, Sanbalooleshe, Goodax Barre, Cabdirisaaq iyo kuwo kale.
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Waxbarashada, Cabdullaahi Goodax Barre, oo ka mid ah, musharixiinta Baladweyne u jooga tartanka kuraasta baarlamaanka, ayaa dhawaan sheegay, in Madaxweyne ku xigeynka Hirshabeelle, uu doonayo, in qaar ka mid ah kuraasta taalla Hiiraan loo xiro xubno ay qoratay Villa Somalia.
Wareysiga uu bixiyay, Yuusuf Dabageed, ayaa ku soo aadaya, xilli, uu shalay dhacay kulan ay labada xaafiis ee ugu sarreysa Hirshabeelle, xal hordhac ah ugu gaareen, qaar ka mid ah, kuraasta khilaafku sababay, taas oo keentay in Guudlaawe, lagu qanciyo inuu jooga magaalada inta ay ka dhamaanayaan kuraasta buuqa dhaliyay.